Hevitra MPANOHARIANA | Ankapobeny | 8
Ny Tantara-Angano Nandalovan'i Zika teto Madagasikara
2016-05-17 @ 09:32 in Ankapobeny
Rehefa tsy takatry ny besinimaro ny hevitra ao anatinao ao dia lasa mihevitra anao ho adala ny olona. Ny hafa faly mampita ny vaovao alefan'ny frantsay midradradradra fa tonga eto Madagasikara ny Zika, aretina azo avy amin'ny moka, lazaina fa miampita amin'ny alalan'ny firaisana ara-nofo ihany koa.
Izaho kosa, sy izay mety ho vitsy dia vitsy any ambadika any, mahasahy milaza fa tsy misy izany Zika izany eto Madagasikara na mety mamely eto aza ny tazo. Tsotra ny antony ary araka ny efa nosoratako tany amin'ny Facebook ihany: Mba zavatra malaza aty amin'ny sarambambem-bahoaka kosa aloha ilay vaovao dia mivoaka amin'ny onjampeo vao tokony hikorapaka ny masoivoho sasany fa toa finiavana hanapotika hatrany ny toekarena Malagasy, amin'ny alalan'ny famotehana ny fizahan-tany, no tsikaritra. Tsy nisy akory na dia tsaho aza teto Madagasikara hoe tonga eto Madagasikara izany Zika izany fa tonga dia teren'ny sasany hisy fotsiny.
Tsy tokony apetraka mangingina mihitsy ny raharaha toy itony fa ny voninahi-pirenena hatrany no tiana hopotehina. Manoratra aho sao lazaina fa tsy misy na dia Malagasy iray akory aza mijoro manohitra izao fanasoketana izao. Mipetraka ny fanamby vaovao eto: Mba firy amin'ireo nampiely ny fahatongavan'ny Zika ary izao no hanitsy ny teniny?
Dia niarahan'ny rehetra nahita fa niova ny votoatin'ny fanazavana ao amin'ny France Diplomatie, ary nanitsy ny vaovaony ry zareo Frantsay. Izaho kosa milaza fa fandresen'ny bilaogera iny, satria bilaogera no nahasahy nanohitra iny filazana nataony iny na dia tsy manampahaizana momba ny fahasalamana aza izy.
Ny mpanao gazety tamin'iny indray mitoraka iny mety ho tsy nahasahy nanohitra fa nanaraka ambokony ihany. Ankehitriny saika ny filazam-baovao rehetra no nilaza ilay fanitsiana... Filazana avy amin'ny Minisiteran'ny fahasalamana teto Madagasikara mbola tsy tena nahasahy nilaza ny olona satria tsy dia inoin-teny loatra fa rehefa Frantsay mihitsy no nilaza vao nanaiky Ra-Malagasy fa hay tena diso tokoa ilay fampitam-baovao...
Tsy nivadika ny andro nanoratana azy...
Jentilisa 17 mey 2016
Ny taona no miova...
2016-01-04 @ 21:44 in Ankapobeny
Eto ampanombohana dia miarahaba ny rehetra indray nahatratra ity taona vaovao diavina ity. Ho taom-pahombiazana sy ho taom-pifaliana ho antsika anie ity taona ity. Tsy ho lava taria aho fa hiditra amin'ny anton-dresaka amin'izay.
Toy ny hafahafa ihany raha tsy tohizana ny fitantarana izay niainana tamin'ny volana desambra lasa teo. Tsy misy intsony ve izany ny tohin-dresaka? Sa nisy zavatra nitranga dia lasa ankamantatra amin'izay hoe mba nanao ahoana? Sa ve hoe efa taona vaovao izao no iainana ka aleo mba zavatra tsara aloha tantaraina voalohany? Izay angamba no nahatonga ny lohateny manao hoe :"Ny taona no miova..."
Minia tsy manoratra ny malaza amin'ny tambajotra sosialy toy ny fanasana olona hihinambe eny Iavoloha na hianoka ny fofona maimbon'Antananarivo feno fako aho fa resaka fiainam-piarahamonina hatrany izy ity na izany aza. Seha-piarahamonina mihatra mivantana amin'ny tsirairay ihany koa satria karazany mihatra aman'aina na mihatra amin'ny mahaolombelona. Karazana tombana no soratako etoana.
Vita ny fety, nisy ireo voatery niasa hatrany na krismasy na taombaovao. Nisy ireo afaka nifandamina ka izay tsy niasa krismasy no miasa taombaovao ary ny niasa krismasy kosa no tsy niasa taombaovao. Tsy ilaozam-pifamaliana anefa izany toe-javatra izany rehefa mitontona andro iray ny safidin'ny rehetra tsy iasana. Nisy ireo nahasahy nilaza fa sady tsy hiasa izy krismasy no tsy hiasa taombaovao saingy azo isaina amin'ny rantsa-tanana izany na efa naka congé mialoha (raha omeny!). Tsikaritra fa misy ireo karazana mpiara-miombon'antoka amin'ny fanomezana toerana ivarotana ho an'ny orinasa, afaka manao fampilazana mialoha rehefa tsy ho afaka ny hisokatra, no nahatsapa ny ngidin'ny manjò ny mpiasa ka nanapa-kevitra ny hikatona mihitsy tamin'ireo andro roa ireo, mba ahafahan'ny mpiasa miara-mifaly amin'ny ankohonany (latsaky ny atsasany izy ireo). Misy kosa ireo mpiara-miombon'antoka ireo no tsy miraharaha izany mahaolombelona izany fa ny vola miditra aminy ihany no fantany (mihoatra ny atsasany izy ireo). Manana fahafahana feno tsy azo teriterena loatra ireo mpiara-miombon'antoka ireo rehefa amin'ny tranga tahaka izao. Voamarika mazava tsara amin'izany fa mbola ezaka manokana hoan'ny Malagasy amin'ny ankapobeny ny fitsinjovana ny hafa.
Zavatra iray nahavariana ihany koa dia nisy tamin'ny mpiasa ihany koa no nitalaho tamin'ireo mpiara-miombon'antoka mba hisokafan'ny toeram-pivarotany fa tsy misy atao, hono, izy amin'ireo fotoana ireo. Mbola tanora loatra angamba ka tsy mahatsapa ny hamamin'ny fiainam-pianakaviana sy ny fiarahana indrindra rehefa amin'ny andro fety. Mety ho eo ihany koa ny matimatin'ny mahazo ravin-taratasy iray rehefa miasa andro fety tahaka ireny, izany hoe atakalo ravin-taratasy misy sandany ny fiainam-pifaliana ao anaty. Mety ho antony iray hafa ihany koa ny te-ho tsara naoty eo anoloan'ny mpampiasa ka mety hiakatra voninahitra vetivety, tsy nisy fampanantenana ny amin'izany loatra anefa. Ny andro iasana andro fety anefa dia tsy soloina andro hafa tsy iasana... ankoatra ny an'ireo "nanery" hivarotra tsy niasa mangingina ny ampitson'ny andro fety.
Nenjakenjanina fatratra ihany koa ny fifampifehezana tamin'ny faramparan'ny taona teo ka raha nomena saran-dalana ho an'ny taxi ny mpiasa-mpivarotra manatitra entana sy fitaovana eny amin'ny foibe (fanao tsy mahazatra fa tsindraindray ihany) dia nandrasana tamin'ny fakantsary avokoa ry zareo ka izay tonga tamin'ny taxibe na an-tongotra teo amin'ny foibe dia nahazo sazy avokoa. Ny mampihomehy amin'ilay saran-dalana anefa dia vola tsy ampy mihitsy (indrindra rehefa faran'ny taona) no nomena ary raha sanatria ka very na misy manendaka na dia eo anoloan'ny foibe aza ireo mpiasa-mpivarotra ireo dia soloin-dry zareo (voaendaka) manontolo ny very. Karazana antsojay itadiavana antony amin'ny fanapahan-kevitra atao ao aoriana kely ao angamba no tena anton'io kendritohina io.
Fehiny: ireo heverintsika ho tsy rariny hitantsika mivandravandra rehetra ireo, toy ny fako misavovona, ny fanasana olona an'arivony hisakafo, ny fividianana mpividy vaventy miharo fandrahonana raha tsy manaiky fifanarahana mandritra ny fifidianana, ny tsindry eny amin'ny fitsarana dia miainga avy any amin'ny isan-tokantrano na isaky ny orinasa na isan'ambaratongan-drafitra ifotony avokoa. Raha tsy mahajoro amin'ny sehatra ifotony dia tsy mahagaga raha menomenona fotsiny no vita rehefa amin'ny sehatra mahasahana ny tanandehibe iray manontolo na mahasahana ny firenena iray manontolo ihany koa aza. Mifototra amin'ny tahotra izany, dia tahotra manoloana ny fahefana afa-mamelona na afa-mamono anao. Izay angamba no mahatonga ahy tsy niresaka loatra ireo olana atrehin'ny firenena raha misy ireo manao danin'ny kibony tsy voakitikitika na aroarovana any amin'ny sehatra kely na antonony any amin'ny misy azy any. Rehefa mahavita miray hina ny voatsindrihazolena rehetra any amin'ny misy azy ka mametraka fifandanjan-kery tsy manan-tahotra na dia amin'ny heverina ho tsy azo toherina aza dia ho tara loatra ny fanapahan-kevitry ny fanjakana mahefa hiaro tena rehefa mahatsapa ny heriny ireo voatsindrihazolena iharan'ny tsy rariny rehetra ireo. Ka tsy aleo ve mampihatra ny ohabolana milaza hoe "gouverner c'est prevoir" ny mpitondra fanjakana ambony sa mbola ny fitadiavam-bola ihany aloha izao no laharam-pahamehana?
Jentilisa 4 janoary 2016
«Mialoha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 38 39 40 Manaraka»